Fizahan-tany sy fivarotan-tena: aiza no toerana azo antoka?
Home » Toerana fitsangatsanganana » Fizahan-tany sy fivarotan-tena: aiza no toerana azo antoka?
Fizahan-tany momba ny firaisana - ny Erotic Museum
Ny mpandeha sasany dia mikasa ny hanao dia lavitra hanatanterahana ny filan'ny nofo. Antsoy hoe fialan-tsasatra manaram-po amin'ny firaisana ity, raha tianao. Manonofinofy ry zareo fa hahafinaritra distrika jiro mena ary miandrandra studio fanaovana fananahana erotika.
Tena tsy misy maharatsy an'izany raha mbola manaraka ny fahamendrehan'ireo mpivaro-tena ny mpandeha. Ny fomba fijerin'ny mpivaro-tena dia tokony hanome azy ireo ny fanajan'izy ireo. Ary ny mpitsangatsangana dia tokony hisoroka an'izay fanondranana olona an-tsokosoko na hetsika mahatafiditra ankizy amin'ny fanararaotana ara-nofo.
Raha lazaina, aiza no toerana azo antoka handray anjara amin'ny fizahan-tany momba ny firaisana? Any amin'ny firenena sasany, ny indostrian'ny firaisana dia miaro ny fahefan'ny mpampihatra lalàna. Raha tadidio izany ary mitady izay toerana tsara fizahan-tany momba ny fanaovana firaisana ara-nofo tsara indrindra hodinihina, ireto misy 10 eto amin'ity lisitra ity:
Thailand dia misy tanàna sasany ampiroboroboana ankolaka ny fizahan-tany ara-pananahana. Ireo tanàna ireo dia tototry ny mpivaro-tena, toa an'i Pattaya sy ny Distrikan'ireo Jiro Mena any Bangkok. Raha ny marina dia satroboninahitry ny firaisana ara-nofo malaza indrindra eto an-tany i Bangkok.
Tena marina amin'ny fizahan-tany be dia be momba azy io, ary nantsoina hoe paradisa ho an'ny mpivaro-tena. Misy andriambavilanitra vonona ny hanakalo ny tolotr'izy ireo amin'ny volan'ny mpandeha iray. Tena marina izany ka azo antoka ny milaza fa misy mpivaro-tena isaky ny metatra toradroa Bangkok.
Ara-dalàna ve anefa izany? Raha ny marina, tsia. Ny lalàna momba ny fizahan-tany na fivarotan-tena dia tsy eken'ny lalàn'ny fanjakana. Voafehin'ny polisy ihany anefa izy io, ary mijery an-jambany ny indostrian'ny fanaovana firaisana ara-nofo ny governemanta noho ny fidiram-bola an-tapitrisany dolara ho an'ny harinkarena faobe.
Any Singapour, ny fanaovana firaisana dia ara-dalàna raha araka ny lalàna sy azo fehezin'ny lalàna, fa ny asa ratsy mifandraika amin'ny fivarotan-tena dia eo ambany fanaraha-mason'ny polisy. Noho io antony io, matetika ny fanaovana firaisana ara-nofo sy ny fandoavany vola dia atao ao ambadiky ny varavarana mihidy.
Na dia ara-dalàna aza ny fivarotan-tena, tsy mety ny pimping sy ny brothel. Zatra manao jery maso ny polisy - toa foto-kevitra mahazatra eo amin'ny sehatry ny fanaovana firaisana izany, na aiza na aiza firenena - fa ny trano fanaovana firaisana malaza kosa dia mila mijery tsara mba hahazoana antoka fa tsy misy asa ratsy ao an-toerana.
Singapore dia firenena manome fahalalahana ho an'ny mpivaro-tena hanao ny raharahany samirery ao amin'ny trano fonenany na tranony any amin'ireo toerana fanta-daza toa ny Geylang Road, Orchard, Decker Road, ary ny Keong Saik Red Light District. Izy ireo koa dia afaka manao izany any amin'ny toerana nampanofain'izy ireo na tany amin'ny hotely an'ny mpanjifa.
Ireo mpivaro-tena dia tsy maintsy manao fizahana ara-pitsaboana mba hahitana ny STD ary tsy maintsy mitondra taratasy fanamarinana milaza izy ireo fa tsy mpitatitra aretina azo avy amin'ny firaisana.
Ny Repoblika Dominikanina
Goavana eo amin'ny fizahan-tany ara-pananahana ny Repoblika Dominikanina, ary eny, ara-dalàna izany ary eo ambany fiarovan'ny mpampihatra lalàna. Fa toa an'i Singapaoro ihany, ny olona iray dia tsy afaka mihodina trano fivarotan-tena hividianana vola amin'ireo mpivaro-tena na amin'ny antoko fahatelo. Ilay mpiasa manao firaisana dia tsy maintsy mitady vola irery.
Ao amin'ny DR, ny mpiasa an-trano dia mety ho mpiasa tsy miankina raha maniry izany izy ireo. Ary misy koa ny fotoana hirotsahana amin'ny asa fivarotana mpivaro-tena ao amin'ny faritra iray fantatra amin'ny anarana hoe faritra ambony.
Any Okraina, Kiev sy Odessa dia fantatra ho tanàna fizahan-tany be mpitia indrindra eto amin'ny firenena. Tsy ara-dalàna ny fizahan-tany momba ny firaisana eto, saingy tsy dia misy idiran'ny lalàna loatra. Ireo tanàna 2 ireo dia misy klioba strip sy parlors fanorana mamelana eraky ny toerana.
Ireo mpitsangatsangana ara-nofo any Okraina dia mametraka ny tanjona fa tsy tokony hiala tsy lavitra amin'ny fitsidihana an'i Kiev sy Odessa izay ahafahan'izy ireo manatanteraka ny filan'ny nofo amin'ny alàlan'ny fanampian'ny vehivavy sy ny lehilahy ukranianina.
Distrika jiro mena malaza any Japon ny araben'i Roppongi any Tokyo. Saingy misy tratra ny fitsangatsanganana ara-nofo eto amin'ity firenena ity.
Na dia manana mpandeha iraisampirenena marobe aza i Japon, dia tsy tena tia lehilahy vahiny ny vehivavy mpivaro-tena. Ny vehivavy japoney dia mino matetika fa ny karazana firaisana ara-nofo tadiavin'ny lehilahy vahiny dia henjana ary amin'izy ireo dia tsy ilaina izany.
Miaraka amin'izany dia tsy tian'izy ireo ny fofon'ny vahiny ary mahita ny sakana amin'ny fiteny iray hisakanana ny tenany mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa.
Fantatrao ve fa 10 isan-jaton'ny olona rehetra izay mandeha any Costa Rica no mandeha manao firaisana? Inona no mampalaza ny firenena? Tsara ve ny vidiny? Moa ve mahay toy izany ireo mpiasa?
Angamba, angamba, fa ny ankamaroany dia satria any Etazonia, tsy ara-dalàna ny fivarotan-tena, ary tsy dia lavitra i Costa Rica.
Raha ny marina, mpifindra monina marobe avy any Etazonia no manao fivarotan-tena any Costa Rica hatramin'ny 80 isan-jato.
Any Venezoelà, ny vehivavy dia manana ny toetra sarobidy indrindra izay mahatonga azy ireo ho toy ny famintinana tena hatsarana izay hita eto an-tany. Marina izany amin'ny isan'ny vehivavy Venezoeliana nahazo ny anaram-boninahitra Miss World.
Eto dia ara-dalàna ny fivarotan-tena, ary fanao mahazatra ny fanaovana firaisana, indrindra any Caracas. Ity tanàna ity dia miroborobo amin'ny serivisy mpanaraka hahafaly ireo mpivahiny manao firaisana.
Eo koa ireo mpivaro-tena ary ao koa ireo tranom-panorana erotika sy spa fanorana.
Espaniôla dia milaza izany rehetra izany - divay, adin'omby, ary fivarotan-tena ara-dalàna. Ny distrika jiro mena any Espana dia be sy miasa.
Ary na dia ao amin'ny tanàna izay tsy misy distrika jiro mena aza, ny mpivahiny dia mety hahita mpivaro-tena vonona hanome vola be ho azy ireo.
Manana laza ratsy amin'ny fanondranana ankizy an-tsokosoko i Indonezia, noho izany dia atoro ny mpitsangatsangana mba hitandrina tsara amin'ny toerana ahitany firaisana ara-nofo.
Angamba ny fomba azo antoka indrindra hahitana firaisana ao Indonezia dia ny fampiasana Internet. Misy peratra fivarotan-tena sy forum momba ny fivarotan-tena izay azon'ny mpivaro-tena miditra amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Any Gili sy Bali, ny fizahan-tany momba ny lahy sy ny vavy dia miteny tsy ofisialy eto - tsy ara-dalàna - noho izany dia omena fitandremana.
Ankehitriny Amsterdam dia malaza amin'ny Distrikan'ny Jiro Mena. Eto, ara-dalàna sy azo antoka tanteraka ny fivarotan-tena. Izy ireo aza dia manana ny ampahany amin'ny tranonkalany natokana ho an'ny Distrika Jiro Mena.
Ny olona iray aza dia afaka mandeha miantsena mivantana amin'ny varavarankely amin'ny alàlan'ny fandehanana fotsiny mandalo ireo trano fivarotan-tena ary mijery ireo mpivaro-tena ao am-baravarankely.
Eo ihany koa ny fisian'ny tranombakoka miray amin'ny firaisana ara-nofo izay ahafahan'ny mpivaro-tena mamantatra zavatra vaovao momba ny fahafinaretan'ny nofo mifandraika amin'ny fitiavana ara-nofo.
Ny minisitry ny fizahantany dia mampanantena asa 100 isan-jato ho an'ny mponina
Ny fiovana mahery vaika dia nanenika ny tranon'ny indostrian'ny fifandraisan'ny bibidia any Afrika Atsimo
32 minitra lasa izay